Ra'iisul Wasaare Rooble oo soo saaray Amar ku socda Golaha Wasiiradda ee Xil-gaarsiinta - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaare Rooble oo soo saaray Amar ku socda Golaha Wasiiradda ee Xil-gaarsiinta
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray Xubnaha Golaha Wasiiradda ee Xil-gaarsiinta in Ra’iisul Wasaaraha lagala tashado go’aan kasta oo ay gaarayaan ama qoraal kasta oo ay soo saarayaan.
Qoraal uu u diray Golaha Wasiirada xilalka siihaya ayaa waxaa uu ku amray in la tashi kaddin nuqul ka mid ah qoraaladooda ay soo ogeysiiyaan Ra’iisul Wasaaraha iyo Sii Hayaha Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka dalka.
Qoraalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in aan la aqbali doonin tallaabo kasta oo ka horimaaneysa tilmaamaha kor ku xusan ee ah amarka la faray Golaha Wasiirada Xil-gaarsiinta.
Hoos Ka Akhriso Warqadda kasoo baxday xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo u ambabaxay dalka Kuwait
Next articleAl-Shabaab oo weeraray Saldhigyada Ciidamada Kenya & dagaal dhacay